ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အငြင်းပွားမှု | မျိုးမြန်မာ
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး, သတင်း.	Tagged: နယ်စပ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်.	Leaveacomment
၁။ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်တွင် မိမိနိုင်ငံ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များမှ အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့ပါ။ မိမိနိုင်ငံပိုင်နက် နယ်မြေသို့ဝင်ရောက်လာသည့် RSO ဟု ယူဆရသော လက်နက်ကိုင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ (ဤသည်ကိုလည်း သတင်းအပြည့်အစုံ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်)
၂။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ မိမိနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမှ သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် ဘင်္ဂလားအစိုးရအား ဖြစ်စဉ်အမှန် ရှင်းပြထားပါသည်။ နှစ်နိုင်ငံ အထင်လွဲမှားမှု မရှိစေရန် သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းလျက် ရှိပါသည်။
၄။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး မထိခိုက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနှင့်အညီ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ရှိ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ချမှတ်ထာသည့် မူဝါဒမှာ (၁) အချုပ်အခြာအာဏာ အထိခိုက်မခံ (၂) ပြည်သူများအကျိုးစီးပွား အထိခိုက်မခံ (၃) နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အထိခိုက်မခံ ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကျန်အပိုင်းများမှာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များ ဖြစ်၍ ထုတ်ပြန်ရန် မရှိပါ။ သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပါသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများ မရှိကြစေလိုပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေဒီယိုသတင်းများမှ ဘင်္ဂလီတစ်ဦးလျှင် မြန်မာ ဆယ်ဦးနှုန်း အသက်သွေးကြွေးပေးဆပ်ရမည် ဟုကြေငြာ။ →